Boorsada Afka Furan ee Furan, Filler & Dhow (waxsoosaarka badan) Soo saaraha iyo Badeecada | GAOGE
Fur Afka Boorsada Fur, Filler & Dhow (wax soo saarka badan)
Nidaamyada boorsada-furan ee GW SERIES waxaa loogu talagalay in lagu rido walxaha lacag la’aanta u socda ee lagu ridayo bacaha afka-furan ee loogu talagalay codsiyada u dhexeeya 5 iyo 50 kg halkii kiish. Nidaamyadu waxay ku habboon yihiin duubista jajabyada iyo dhagaxyada ka yimaada cuntada, Quudinta, Cuntada xayawaanka, Kiimikooyinka iyo macdanta.
Qalabka Mashiinka Baakadaha Baakadaha ee GW-550 Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gaarka ah ayaa si gaar ah ugu habboon maaddada Granular, qalabka wax lagu duubo waa bac warqad ah, bacda PE, bacda la tolay, baakadka baakadka waa 10-25kg, xawaaraha ugu badan wuxuu gaari karaa 3-8bags / min. Waxtarka sare, naqshadeynta horumarsan ee ku habboon shuruudaha kala duwan
Baakadaha 10-25kg, oo leh 1000 kiish / saac (sida ku xusan bac kala duwan, alaabta ceyriinka ah)
Waxay ku habboon tahay bacda warqadda ah, bacda PE, bacda la tolay. Bacda waraaqda & bacda leh tolmo wanaagsan waxay qaadan kartaa shaabadaynta tolida (DS-8C). Bacda PE waxay qaadataa shaabad kulul (HS-22D). (Go'aanka kama dambaysta ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.)
Nidaamka gelinta bacda faaruqinta ah ee lagu ogaado baaraha labadiisa-xaqiijin. Nidaamka buuxinta ayaa si otomaatig ah u istaagaya marka daadku muuqdo ama aan bac la saarin.
Quudinta bacda otomaatiga ah waxay ka kooban tahay 3 cutub oo jiifa, qayb kasta waxay keydin kartaa 100 kiish (bacda PE), oo ku habboon wax soo saar xawaare sare leh.
Si toos ah oo otomaatig ah u socda.
Dhexdhexaad dheeri ah oo dhejis ah (xulasho), hawo hawleed (ikhtiyaar), si looga hortago in badeecada la buufiyo, kor u qaadista natiijada xaalufinta.
Qalabka daalka gaaska ee gariirka ee bacda aan godka laga qodin ayaa ikhtiyaari ah, si looga takhaluso hawada nasashada ee ku jirta badeecada.
Aaladda Amniga & Xakamaynta
Baaraha yaraanta - sida 2 cutub oo aan lahayn boorso, ka dibna iftiinka iftiinka & digniinta dhawaaqa – waa waqtigii la keeni lahaa bacaha. Marka 3 cutub midkoodna bac-mashiinku si otomaatig ah u istaago
Cillad: qalabka baaritaanka ee furitaanka bacda — boorsada ayaa si khaldan madaxa loogu garaacay, ka soo saar boorsada, jooji mishiinka qiyaasta calaamadaha. Ka dib markii dhibaatadan la xalliyey, dib u bilow hawsha buuxinta.
Tolinta qalabka wax lagu baaro — marka mashiinka tolitaanka tolida la jebiyo, iftiinka iftiinka, dhawaaqa dhawaaqa, mashiinka oo dhan si otomaatig ah ayuu u istaagay.
Baadhaha xadhigga xadhigga - iftiimiyaha iftiimiyaha inta uu tolmayo xadhig xadhiggu. Dhawaaqa dhawaaqa - waa waqtigii la keeni lahaa xarig tolid.
Bacda mashiinka shaashadda kulul oo aan lahayn xakamaynta heerkulka otomaatiga ah ama kuleylka kuleyliyaha baare jaban.
Qalabka wax lagu rakibo bacda-la-xidho prefabricated (oo lagu dhejiyay filimka PP / PE)
Baaxadda samaynta bacda (500-700mm) x (300-400mm) LXW
Qiyaasta cabirka 5-15KG
Saxnaanta cabirka G 10G
Xawaaraha baakadka 10-15bags / min (kala duwanaansho yar oo kuxiran alaabada baakada, cabirka boorsada iwm)
Heerkulka heerkulka -10 ° C ~ + 45 ° C
Awood 220V 50HZ 3Kw
Isticmaalka Hawada 0.5 ~ 0.7MPa
Qiyaasaha dibedda 5860x2500x4140mm (L x W x H)
Hore: Mashiinka Baakadaha Weelka culus ee Gawaarida Gawaarida ah
Xiga: Khadka otomaatiga ah Qalabka Mashiinka Bacda Afka Fur
Rice Automatic Bag xirxirida Bag Mashiinka B ...
Bacda bacriminta Automatic Machine xirxirida Op ...
5-50kg Automatic kiimikada Product xirxirida Machi ...
5-50kg Mashiinka Mashiinka Mashiinka Kumbuyuutarka ee Furan-mo ...
Mashiinka Xirmada Mashiinka otomaatiga ah Af-furan ...
Mashiinka Xirxiranaya Cusbada Automatic Open B Bag Bag ...